Tsy irery i Jesosy, ny Fiangonan'Andriamanitra an'Andriamanitra Suisse (WKG)
"Voahombo niaraka tamin’i Kristy aho" hoy ny apostoly Paoly (Gal 2,20:2,20), fa tsy i Paoly irery ihany. "Niara-maty tamin'i Kristy ianareo" hoy izy tamin'ny kristiana hafa (Kolosiana 6,4:XNUMX). "Halevina miaraka aminy isika," hoy izy tamin'ny Romanina (Romana XNUMX). Inona no hiseho eto? Ireo olona rehetra ireo dia tsy tena tao amin'ilay havoana tany Jerosalema. Inona no resahin'i Paoly eto? Ny kristiana rehetra, na fantany izany na tsia, dia miombona amin'ny hazofijalian'i Kristy.
Tsy izay ihany anefa. Manaiky koa isika - ary mandray anjara amin'ny - nitsanganany tamin'ny maty! "Andriamanitra nanangana antsika niaraka taminy" (Ef 2,6: 2,13). Teo izahay ny marainan'ny fitsanganana. "Andriamanitra efa nanohana anao tao aminy" (Kolosiana 3,1:XNUMX). "Efa niara-nitsangana tamin'i Kristy ianao (Kolosiana XNUMX: XNUMX).
Tsy nanao afa-tsy ny maty fotsiny i Jesosy ary hitsangana indray. Izy dia niaina fiainana feno fahamarinana ary isika koa manana anjara amin'ity fiainana ity. Mazava ho azy fa tsy tonga lafatra isika - na dia tsy lavorary tsikelikely aza - fa nantsoina handray anjara amin'ny fiainana vaovao sy be tondran'i Kristy isika. Mamintina izany rehetra izany i Paoly rehefa nanoratra hoe: "Koa alevina miaraka aminy isika amin'ny alàlan'ny batisa ho amin'ny fahafatesana, ka mba tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny Ray, dia afaka mandeha amin'ny fiainana vaovao koa isika." nalevina, niara-natsangana taminy niara-nipetraka taminy.
I Paoly no nanonona an'io teny io hoe: “Voahombo miaraka amin'i Kristy aho. Velona aho, nefa tsy izaho izao, fa Kristy no mitoetra ato amiko. Fa izay ivelomako ankehitriny dia miaina amin'ny finoana ny Zanak'Andriamanitra aho, Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy ”(Gal 2,20:XNUMX).
Hoy i Jesosy tamin'ny mpianany: "Raiso ny hazo fijaliana," ka manaraha ahy. Fantaro ny tenanao amiko. Avelao hohomboana amin'ny hazo fijaliana ny fiainana taloha ary ny fiainana vaovao hanjaka amin'ny vatanao. Avelao hitranga amin'ny alalako. Avelao aho hiaina ao aminao ary hanome anao fiainana mandrakizay. "